जाडो मौसममा कुन सुप खादा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalजाडो मौसममा कुन सुप खादा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ?
घरैपिच्छै रुख’ हाम्रो अभियान हो – ओली
चलचित्रमा भुवनको अपोजिटमा अभिनेत्री रीमा विश्वकर्माले अभिनय गर्नेछिन् ।
सलमानको ‘भारत’ले पहिलो दिन ४३ देखि ४५ करोडको व्यापार गरे
Home स्वास्थ्य जाडो मौसममा कुन सुप खादा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ?
जाडो मौसममा कुन सुप खादा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ?
भिटामिन सी र ए ले भरिपुर्ण टमाटर सुपले कोलेस्ट्रोल कम गर्छ र हृदयको अवरोध हटाउदछ। यसले जाडोमा हुने श्वासप्रश्वास सम्बन्धित रोगहरूबाट बचाउछ। शरीरको छालालाई रक्षा गरि हानिकारक र सुक्खालाई नम्र बनाउँछ। टमाटरमा भएको ल्याईकोपिनले शरीरमा फ्याट कम गर्न मद्दत गर्दछ। क्यानोभा वा जैतूनको तेलकोसँग बनाइएको टमाटर सुपले तौल कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा रहेको सेलिनियम एनीमियाले रगतको कमी हटाउँछ र रक्त परिसंचरण बढाउँछ। यसमा रहेको क्यारोटोनयड जस्ता एन्टीओक्सिडेन्टले क्यान्सर कोशिका वृद्धिलाई रोकथाम गर्दछ।
टोफूको सुपले ऊर्जा बढाउछ र मधुमेहका रोगीले पनि खानु उपलब्धि मुलक छ । सुपले कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप कम गर्दछ। भटमासबाट बनेको यसमा सलाद पात, मसिनो आकारमा काटिएको तरकारी र सुन्तला रस मिश्रित हुन्छ । कम क्यालोरीको कारणले यसले पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यसले पाचन शक्तिलाई राम्रो गर्नुका साथै पोषक तत्वहरूलाई अवशोषित गर्न मद्दत गर्दछ। यो एसिडइडेन्ट र एन्टी वायरल पनि हो यसले प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन सहयोग गर्छ । साथै हृदय रोगको बिरुद्ध लड्न सहयोग गर्दछ।
च्याउको सुप सेलिनियमको राम्रो स्रोत हुनुका साथै शरीरलाई डिटेक्सिभ गरेर ब्लड क्यान्सर रोक्नलाई मद्दत गर्छ। यसले स्नायु प्रणालीलाई नियंत्रण गरेर रक्तचाप बढ् दिदैन । खनिजले चिसोमा हुने मांसपेशिको दुखाइ र क्रैम्पलाई कम गर्दछ। यसमा अवस्थित फोलिक एसिडले छालालाई स्वस्थ बनाउनमा सहयोगी हुन्छ । सुपले सेतो रक्त कोशिकाहरू सिर्जना गर्दछ र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। सुपमा च्याउ को तीन भागहरु धेरै राम्रो छन् – ऋषि, माइटेक, शिटेक । रोजेरी, सेज, कुउलारी, अर्गो, अजमोद, सुप जस्ता जडीबूटीहरु मिसाउनाले सुप स्वास्थ्यको लागि अधिक लाभदायक हुन्छ। यी जडीबूटीहरु मस्तिष्कको लागि राम्रो हुन्छ, यसले सम्झन सक्ने क्षमता बढाउछ । रक्त(मस्तिष्क बाधाको कारणले मस्तिष्कका क्षतिबाट रोक्छ। यसमा कोकोन पनि मिसाउन सकिन्छ , जुन एन्टिसेप्टिकको रूपमा कार्य गर्दछ र शरीरलाई जीवाणु वा संक्रमणबाट रोक्छ।
कलिलो मकैको सुप
पोषक तत्वहरू र एन्टिओक्सिडेन्टहरूले भरिपुर्ण कलिलो मकैको सुपले हृदयको अवरोध खोल्छ । यसले हाइपरटेन्सन घटाउाएर हृदय आक्रमणको जोखिमलाई १० प्रतिशत कम गर्छ । चिसोमा हुने श्वसन समस्याहरूलाई पनि कम गर्दछ। यसले मस्तिष्कको तन्त्रिका खोल्छ, यसैले तनाव घटाउन र मस्तिष्क स्ट्रोकको जोखिमलाई रोक्छ । यसमा समावेश भएको बीटा क्यारोटिनले जाडोमा प्रदूषणबाट हुने आँखाको समस्या रोक्छ ।
फाइबरले भरिपुर्ण मटर सुपमा रहेको पोटाशियम हाम्रो बन्द तन्त्रहरुलाई खोलेर रक्त सर्कुलेशन राख्नको लागी सहयोग गर्दछ । जुसले रक्तचाप, हृदय रोगहरुमा लाभदायक हुन्छ। यसमा पाइने ‘भिटामिन के’ले चोट लाग्दा हुने रक्त प्रवाहमा रगत जम्न मद्दत गर्दछ । , त्यसैले यो मधुमेहको लागि उपयोगी छ। ‘भिटामिन के’ ले हड्डीलाई बलियो बनाउँछ। एन्टि इन्फ्लेमेटरी तत्वहरूको कारण अल्जाइमरका रोगहरुको लागि पनि यो लाभदायक छ। फाइबर प्रोटीनले भरपुर मटर सुप लामो समयसम्म पेट भरिन्छ । यसमा तिलको तेल मिश्रणले चिसो र दर्दनाक दुखाइमा राहत दिन्छ। यो चिसो मौसममा हुने छालाको सुक्खापन कम गर्न पनि फाइदाजनक छ । यसले थकान कम गर्न मद्दत गर्दछ र खेलाडीहरूको लागि धेरै लाभदायक छ ।
राजमा, चनाबाट बनाइएको प्रोटीन सुप तापक्रमको कारण जाडोमामा लाभकारी छ। यसले प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउँछ र चिसोमा हुने संक्रमण रोक्छ। एन्टीओक्सिडेन्टमा, फाइबर, प्रोटीन र अन्य पोषक तत्वहरूले भरिपुर्ण प्रोटिन सुपले थकान कम गर्छ। एनीमियाका रोगीहरूको लागि लाभकारी छ। यसले कोलिस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा राखेर हृदयसका समस्या टाढै राख्न मदत गर्छ । यसमा रहेको एस्ट्रोजेनिक इफेक्सले क्यान्सर रोक्न मद्दत गर्दछ। चिसोमा गाठागुठि दुखाइमा राहत दिन्छ। यसले ग्यास, यूरिक एसिडलाई पनि कम गर्छ।
कति खाने सुप
सबै उमेरका मानिसहरूको लागि सुप खान लाभदायक हुन्छ । सुप वृद्ध र बिरामीको लागि विशेष गरी राम्रो हुन्छ किनकि उनीहरूलाई खाना चपाउने र पचाउने समस्या हुने गर्दछन्। सुपले उनिहरुको शरिरमा पौष्टिक तत्वको आवश्यकता पुर्ण हुन्छ । तरकारी दाल खान दिक्दार मान्ने बच्चाहरुको लागि पनि सुप फाइदाजनक छ । पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरुका लागि, दैनिक ५० मिलीलीटर सुप खानु राम्रो हुन्छ।
कुन समय खादा राम्रो
आहार विशेषज्ञहरूको अनुसार खाली पेटको सुप खाए शरीरमा चाँडै लाग्ने गर्छ । त्यसैले सामान्यतया सुप खाना खानुभन्दा पहिले खानु पर्दछ । सुप खाने सबैभन्दा राम्रो समय साँझको समय ६ देखि ७ बजे बिच हो ।
बालाजु वाइपासमा टिप्पर पल्टिँदा एकजनाको मृत्यु, २ जना घाइते
वर्षभर चर्चामा रहेका खेलाडी: मोडरिचदेखि ह्यारी केनसम्म
डेंगु भाइरस किन छिटो फैलिन्छ ?
कति खाने चिनी ?
विषादी प्रयोग गरेका आँप बजारमा छ्यापछ्याप्ती
पुरानो खोकीदेखि मुर्छा पर्नेसम्म अचूक औषधि कपुरको फाइदै फाइदा